माओवादीको बलियो खम्बा ढल्यो, प्रचण्डकै दाहिने हात एमालेमा प्रवेश — Imandarmedia.com
माओवादीको बलियो खम्बा ढल्यो, प्रचण्डकै दाहिने हात एमालेमा प्रवेश
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बलियो खम्बा ढलेको छ। पूर्वजनमुक्ति सेनाका प्लाटुन कमान्डर चित्रबहादुर राना नेकपा एमालेमा प्रबेश गरेपछि माओवादीको बलियो खम्बा ढलेको हो। नेपाल कराँते महासंघका अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीसमेत रहेको माओवादी नेता रानाले नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सल्यान जिल्लाको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद गुलावजंग शाहले उनलाई पार्टीमा स्वागत गरेका हुन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको १० वर्षे यु’द्धमा जनमुक्ति सेनाको प्लाटुन कमान्डरका रूपमा रहेका उनी एकीकृत नेकपा माओवादी बागचौर नगर कमिटीका सदस्य थिए।
आफू पूर्वजनमुक्ति सेनाको प्लाटुन कमान्डर र बागचौर नगर कमिटीमा रहेर नेकपा माओवादीमा लामो समय सेवा गरेको सम्झँदै उनले आफू खेल जगतको व्यक्ति भएको र आफ्नो सम्पूर्ण गुरु तथा खेल क्षेत्रका साथीहरू एमालेमा रहेकाले आफू पनि सँगै रहन पार्टी प्रवेश गरेको बताए।
राना बागचौर–१० पिपलनेटा निवासी हुन्। उनले भने, ‘मं जनमुक्ति सेना र बागचौर नगर कमिटीमा रहँदा सबै माओवादी साथीहरूसँग मित्रवत व्यवहार गरेको छु । कुनै साथीप्रति मेरो रिसइबी र आग्रह–पूर्वाग्रह भएर माओवादी पार्टी छाडेको होइन।
ओलीले माओवादीलाई जिस्काउँदाको परिणाम भोगिरहेका छन प्रचण्ड : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी जिस्काउँदाको परिणाम भोग्न थालेको बताएका छन्।
सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा शनिबार आयोजित एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र महेन्द्र राय यादव निकट नेपाल लोकतान्त्रिक शिक्षक फेडेरेसन एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले गण्डकी, लुम्बिनी र वाग्मती प्रदेशमा ओली निकट सरकार रहेकाले ढालेको तथा अबको १५ दिनभित्र प्रदेश नम्बर–१ मा पनि अर्को सरकार बन्ने बताए।
उनले ओलीको अहंकारकै कारण तीन प्रदेशमा सरकार गइसकेको र चौथो रुपमा रहेको प्रदेश–१ ढुलमुल ढुलमुल अवस्थामा रहेको बताए। ‘मैले माओवादी आगो हो, आगोसँग नखेल भनेर प्रधानमन्त्री हुँदा नै भनेको थिएँ, तर उनले मानेनन्, फलस्वरुप आफू पनि बालुवाटारबाट बालकोट जानुपर्‍यो, तीन प्रदेश पनि गयो, अब प्रदेश १ जाँदैछ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक स्थिरताका लागि पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनाउँदै वामपन्थीहरुलाई समाजवादतर्फ लाने योजना रहे पनि केपी ओलीको षड्यन्त्र, निरंकुश शैली, एकाधिकारवादी, अहंकारीका कारण बादशाहजस्तो रहेको दुई तिहाइको सरकार ढाल्नु परेको बताए।
नेता दाहालले मधेसी जनतासँगको प्रेममा ओलीसहितका केही तत्वहरु भिलेनको रोल खेलेर मधेसी जनतासँग अलग्याउन खोजिरहेको आरोप लगाए। उनले मधेसी जनताको अधिकारका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव राखे पनि ओलीसहितका षड्यन्त्रकारीहरुले पास हुन नदिएको जिकिर गरे।
ओलीलाई मधेस विरोधीको संज्ञा दिँदै दाहालले मधेसका मसिहा भनाउँदा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीका मतियार बनेको आरोप लगाए। उनले मधेसी जनताको पक्षमा काम नगर्ने राजेन्द्र र महन्थ मधेसका मसिहा तथा मधेसी नै नरहेको आरोप लगाए।
नेता दाहालले प्रविधिकरुपमा कुनै त्रुटी नभए प्रधानमन्त्री फर्केपछि नागरिकताको ऐन पारित हुने विश्वास दिलाए। अध्यक्ष दाहालले नेपालमा अझै पनि शिक्षा क्षेत्र पछाडी परेको बताए। उनले शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गर्दै आएको बताए । दाहालले नेपालको विकास नहुनुमा शिक्षा क्षेत्र पछाडि पर्नु रहेको बताए।
उनले यसका लागि नयाँ किसिमको आन्दोलन गर्नुपरे आफू त्यसका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए। शिक्षक संगठनको एकताको घोषणा गर्दै दाहालले मधेसमा रहेको जसपा एकीकरण गर्न आह्वानसमेत गरे।
कपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टीसँग एकताको प्रस्ताव गरेका छन्। शनिबार सर्लाहीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले छिटै पार्टी एकता गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
कार्यक्रममा आफूसँगै उपस्थित जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘म महेन्द्रजीलाई पनि भन्छु पार्टी एकता गरौं, ढुक्कै। क्षेत्रीय पार्टी बनाएर किन बस्ने ?
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आफूलाई राम्रोसँग चिन्ने भन्दै प्रचण्डले भने, ‘गठबन्धन त हामीले गरेकै छौं। अब पार्टी एकता गरौं। ढिलो नगरौं, तपाईंहरुलाई चाहिने अधिकार र सम्मान हामी दिन्छौं।
प्रचण्डले पार्टी एकताको छिटो निर्णय गरेर जनकपुरमा घोषणा गर्नुपर्ने पनि बताए। ‘नडराई पार्टी एउटै बनाऔं, सिद्धियो, म जनकपुरमा आउँछु। जनकपुरमा घोषणा गरौं’ उनले भने।
प्रचण्डले अघि भने, ‘एकता मन परेन भने भन्यो भने तपाईहरुमा पनि केही पल्क्यो भन्ने बुझे हुन्छ, भीरबाट हामफाल्ने गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन। अब मधेस माओवादीमय हुनेछ। मधेस माओवादीमय नहुँदासम्म मधेसी जनताको वास्तविक अधिकार प्राप्त नहुने र विकास पनि नहुने प्रचण्डले दावी गरे।
प्रचण्डले आफूलाई मधेसको मसिहा भन्ने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो मधेसविरोधी केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सहभागी भएको टिप्पणी गरे ।‘को मधेसको मित्र हो, को मधेसको दुश्मन हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘महन्थ ठाकुरहरु मधेसी हुन् ?
बिचरा माधव नेपालको दौडधुप देख्दा दया लाग्छ केपी ओली: नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस र राजतन्त्रले समाप्त पार्न नसकेको एमालेलाई समाप्त पार्ने सपना नदेख्न आग्रह गरेका छन्।
सिन्धुपाल्चोक-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले सिध्याउने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको दौडधुप देखेर दया लागेको बताए।
‘समाजवाद ल्याउन लाग्यो भनेर एमालेलाई समाप्त पार्न खोजे। बिचरा माधव नेपालको दौडधुप देख्दा दया लाग्छ। कहिले पोखरा, कहिले धरान धनकुटा, कहिले बागलुङ, कहिले कहाँ ? हातमा टोपी लिएर कुदेका छन् । देश बनाउन होइन, एमाले बिगार्न कुद्या छन्,’ उनले भने,
‘राणातन्त्रले मार्न नसकेको, कांग्रेसले प्रतिबन्ध लगाएर मास्न नसकेको, ०४६ सालमा कार्यकर्तामाथि देशभर मुद्दा लाग्दा सकिएन, राजतन्त्रले सकेन, कांग्रेसले सकेन । राजतन्त्र सिध्याएर आएको पार्टीलाई अब सिध्याउँछु को लागेको छ भने माधव नेपाल।
माधव नेपाल डुलेर, कुदेर, तमासा गरेर केही फरक नपर्ने ओलीको भनाइ थियो। ‘एमाले सिध्याउन कुदेका छन्। किन सिध्याउने भन्दा यो साढे तीन वर्ष अचम्मै गर्‍यो। कोभिड महामारीमा विकास भएको छ, धरहरा उठेको छ,
एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेको छ, बाटो निर्माण भइरहेको छ। अस्पताल बनेको छ। एमालेले सिध्याउने भो भनेर भत्भत् पोल्यो। हाम्रो विकास देखेर हाम्रा विरोधीहरु आत्तिए। एमाले विरोधी भनेको देशविरोधी हो,’ उनले भने।
ओलीले कांग्रेसको पनि आलोचना गरे । सहकर्मी पार्टीलाई छोडेर दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी र भडुवालाई बोक्ने कांग्रेसको पहिलेकै परम्परा भन्दै ओलीले अहिले पनि देश भडुवा, देश बिगार्वाहरुलाई कांग्रेसले बोकेकोमा आक्रोश पोखे।